भिडियो: के मार्केटिंगले उत्पाद बनाउँछ? | Martech Zone
फ्रान्क डेल, सीईओ का यो एक शानदार र हास्यास्पद खोज हो कम्पेन्डियम। मलाई वास्तवमै केहि कम्पनीहरू थाहा छ जहाँ मार्केटिंगले प्रयोगकर्ता अनुभव र सेवाहरूको उत्पादन प्रस्तावहरूलाई विस्तार गर्दछ। वास्तवमा, मैले वास्तवमै प्रदर्शनहरू अनुरोध गरेको छु जुन उनीहरूको अनुप्रयोग खोल्दैन, यसको साटो एक चम्किलो र चम्किला पावरपोइन्टको बाहिर काम गर्दै। यो कुनै समस्या होइन जब तपाईंको उत्पादनको विज्ञापन गरिन्छ, तर मैले यो देखेको पनि केही कम्पनीहरूले टाढा फाँट्दा विपणन एक वास्तविक फोटोको फोटोशप गरिएको, अतिरंजित ग्लैमर शट हुँदा।
मार्केटिंगले अपेक्षाहरू सेट गर्दछ, बिक्रीले उनीहरूको पुष्टि गर्दछ र आयोगलाई सlects्कलन गर्दछ, ग्राहकले हस्ताक्षर गर्छ र तुरुन्तै तल झर्छ। समस्या सजिलै खाता व्यवस्थापन र ग्राहक सेवा टोलीमा डाउनहिल रोल। ती टोलीहरूसँग छ अवधारण तिनीहरूको प्रमुख प्रदर्शन सूचक मध्ये एकको रूपमा ... त्यसैले जब कम्पनीहरूले छाड्छन् वा नवीकरण गर्दैनन्, खाता व्यवस्थापन र ग्राहक सेवा टोली उत्तरदायी हुन्छन्। पूर्ण रूपमा तिनीहरूको नियन्त्रण बाहिरका लागि उत्तरदायी।
के यो सही कुरा हो? मलाई लाग्दैन कि तपाईंको उत्पादनलाई गलत अर्थ लगाउनु सही काम गर्नु हो। जे होस्, केहि कम्पनीहरूले यसलाई गर्छन छिटो बढ्न। द्रुत रूपमा बढ्दै, तिनीहरू बजार सेयर जित्न, लगानी जित्न, र पुन: लगानी गर्न सक्षम छन् उठ्नुहोस् छविमा तिनीहरू चित्रित छन्। जब यी मध्ये केही कम्पनीहरूले दशौं वा सयौं लाखौं डलरहरू बनाउँदैछन्, मलाई गाह्रो छ कि यो खराब रणनीति हो भनेर भन्न गाह्रो छ। यो केवल यस्तो चीज हो जुन मलाई मनपर्दैन। मलाई कम्पनीहरू मनपर्दैन जो यो गर्छ। र म आफ्नो ग्राहकहरु लाई ती कम्पनीहरु सिफारिस गर्न मन पराउँदैन।
टैग: उत्पादनउत्पादन व्यवस्थापनउत्पाद मार्केटिंगआर सी ग्लोसेतो बच्चाहरू
अगस्ट 23, 2011 बेलुका 7:31 बजे
हाहाहा, "उपभोक्ताले किन इन्कन्डेन्सेन्ट पेय पदार्थ रोज्ने?"
अगस्ट 24, 2011 मा 12: 21 AM
राम्रो भिडियो डग तर मैले भन्नु पर्दछ कि सम्बन्धित भिडियोहरू रमाईलो र अधिक स्वादहीन हुन्छ जुन तपाईं डुबाइदिनुहुन्छ।